वर्षौंसम्म १३ छोराछोरीलाई बाँधेर राख्ने आमा-बुबा – जीवनशैली
Home /अन्तर्राष्ट्रिय/वर्षौंसम्म १३ छोराछोरीलाई बाँधेर राख्ने आमा-बुबा
सयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोनिया आफ्ना १३ जना छोराछोरीलाई गरै कानुनी रूपमा बिस्तारमा बाँधेर राख्ने र उनीहरूलाई भोकै राख्ने दम्पतिलाई उनीहरूका बालबालिकाले माफ गरिदिएका छन्।
१३ बालबालिकामा आमा-बुवा डेविड र लुइस टर्पिनले रिभर साइड काउन्टीको अदालतमा आफ्नो अपराध स्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई अलदालतले २५ वर्षसम्म जेल बस्नु पर्ने सजाय सुनाएको थियो। आश छ यी दम्पतिले अबको जीवन जेलमा बिताउनु पर्नेछ।
यी दम्पतिलाई सन् २०१८ को जनावरीमा पक्राउ गरिएको थियो। उनी १७ वर्षीया छोरी घरबाट भागेर उक्त कुराको जानकारी दिइकी थिइन्। टर्पिन दम्पति कम्तिमा पनि ९ वर्षसम्म आफ्ना १३ मध्ये १२ छोराछोरीलाई यातना दिने, दुर्व्यवहार गर्ने र फलामको सिक्रिले बाँधेर राख्ने आरोपमा दोषी भेटिएका हुन्।
डेभिट र लुइसका ती बालबालिकाले अदालतमा यी सबै दुर्व्यवहारका पछि पनि उनीहरू आफ्ना बुवाआमालाई प्रेम गर्ने बताए। यी दम्पति एक छोराको भनाइ उनका भाइले पढेर सुनाए, ‘म आफ्ना बुबाआमालाई अत्यान्तै माया गर्छु। यो हामीलाई पालन पोषण गर्ने राम्रो तरिका त थिएन तर उनीहरूले मलाई यस्तो मान्छे बनाएका हुन्, जनु म अहिले छु।’
५६ वर्षीय डेविड टुर्पिन र ४९ वर्षीया लुइस टुर्पिनले आफ्ना बालबालिकालाई पटकपटक सजाय दिन्थे र पिट्थे पनि। त्यसपछि ती बालबालिकाले घरबाट भाग्ने योजना बनाए।
ती दम्पतिका अर्का एक बच्चाले भनेको कुरा सुनेर त झन शरीर नै सिरिङ हुन्छ। ‘ममाथि घटेको घटनालाई मैले शब्दबाट भन्न सक्निनँ। अहिले पनि कतिबेला कतिबेला मलाई नराम्रा सपना आउँछन्। मैले सपना भाइबहिनीलाई सिक्रिमा बाँधेर पिटिरहेको देख्छु’ उनले भने, अब त्यो घटना बितिसकेको छ र बाबाआमाले हामीमाथि जुन दुर्व्यवहार गरे त्यसलाई मैले माफ गरिदिएको छु।’
तर सबै बच्चाहरूको व्यवहार समान थिएन। एउटी छोरीले भनिन्, ‘मेरा बुबाआमाले मेरो पूरै जीवन नै तहसनहस पारिदिए। तर आब म आफ्नो जीवनलाई फिर्ता लिँदै छु। म मजबुत छु। म फाइट हुँ र म रकेटको गतितमा जिन्दगीलाई अगाडि बढाइरहेकी छु।’
उनले अगाडि थपिन्, ‘मेरा बुबाले आमालाई परिवर्तन गरिदिए। मैले यस्तो हुँदा देखेकी छु। उनीहरूले मलाई पनि परिवर्तन गर्नै लागेका थिए तर मैले यस्तो किन हुँदै छ भन्नु कुराको महसुस गरेँ।’
आमा-बुबाले के भने?
डेभिट र लुइसले रुदै आफ्ना छोराछोरीसँग माफी मागे। बुबाको भनाइ उनका वकिलले पढेर सुनाए ।
त्यसमा लेखेको थियो, ‘मैल सही तरिकाले घरमा शिक्षा र अनुशासन सिकाउने प्रयास गरेँ। मैले कहिल्यै पनि आफ्ना छोराछोरीलाई हानी पुर्‍याउन चाहेको थिएन। मैले मेरा छोराछोरीलाई अत्यान्त माया गर्छु आशा छ उनीहरूले मलाई माफ गरिदिनेछन्।’
डेभिड अमेरिकाको प्रसिद्ध रक्षा उत्पादन लाकहिड मार्टिन र नोर्थोप ग्रुम्यानमा इन्जिनियर रहेका थिए।
हाउस वाइफ लुइसले कोर्टमा आफूले गरेको व्यवाहार प्रति माफी मागिन्। ‘मैले मेरा छोराछोरीलाई हृदयदेखि नै प्रेम गर्छु। आशा छ उनीहरूलाई हेर्न, आंगालो मार्न र उनीहरूका सामु क्षमायाचना गर्ने मौका मिल्ने छ।’
न्यायाधीशले के भने?
अदालतमा न्यायाधीशले उनीहरूलाई ‘स्वास्थी क्रूर र अमानवीय व्यवहार’ भन्दा निन्दा गर्दा उनीहरू अनुहारमा कुनै भाव देखिएन।
न्यायाधीश वर्नार्ड श्वाट्‍र्जले भने, ‘तपाईंले आफ्ना बच्चाहरूमा थि के गर्नु भयो, तो कुरा अब संसार सामू पुगेको छ। यसको साजय कम दिनुको कारण हो, तपाईंहरूले सुरुमै आफ्नो दोष स्वीकार गर्नु भयो।’
उनले अगाडि थपे, ‘तपाईंको हाउस अफ हररमा तपाईंहरूको हिंसालाई सहिरहे तर तपाईंले उनीलाई मानसिक तथा शारीरिक रूपमा नोक्सानी पुर्‍याइरहुनु भयो।’
बच्चाहरूले के के कुरा सहे?
लस एन्जेलिसको बाहिर दक्षिणमा ११२ किलोमिटर दूरीमा रहेको एउटा सुन्दर क्षेत्र उनीको घर छ। वरपर जताततै सुन्दर वातावरण रहेता पनि सुरक्षाकर्मी उनीहरूको घरमा पुग्दा यत्रतत्र फोहोरमात्रै देखे।
सुरक्षाकर्मीले छाप मार्दाका क्रममा २ देखि २९ वर्षसम्मका यी बालबालिका पूर्ण रूपले कुपोषित पाइएका थिए। एउटा २२ वर्षीय छोरा बिस्तारामा सिक्रिले बाँधिएको अवस्थामा भेटिएका थिए। उनीकी दुई बहिनीहरू भर्खरै सिक्रिबाट छुटाइएका थिए। उनीहरूलाई कहिल्यै पनि दाँतका डाक्टरसँग पनि देखाइएको थिएन।
केही भाइबहिनीहरूको वृद्धि पनि सुस्त गति भएको थियो। पहिलो पटकमा त प्रहरीहरूले उनीहरूलाई बच्चा सोचेका थिए।
घटना कसरी आयो बाहिर ?
टर्पिन दम्पतिकी एउटी छोरीले आपत्कालीन नम्बर ९११ मा फोन गरेको अडियो भेटिएको थियो। अडियोमा त्यहाँ रहेका बालबालिकाको स्थितिका बारेमा बताइएको थियो।
अडियोमा ती बालिकाले भनेकी छन्, ‘…मेरी दुई बहिनी र एक भाइ… बिस्तारामा सिक्रिले बाँधिएका छन्।’ १७ वर्षीय ती युवतीलाई आफ्नो घरको ठेगनासम्म थाहा थिएन। उनले भनेकी थिइन्, ‘म कहिलेकाही सुतेर उठ्दा घरमा साँस लिन पनि सक्दिन। किनकि यहाँ अत्यन्तै दुर्गन्ध फैलिएको छ।’
ती युवतीलाई महिना र वर्षसम्मको थाहा थिएन। त्यस्तै मेडिकेशन अर्थात चिकित्सा शब्दको अर्थसमेत जान्दनथिन्। ती सबै बच्चाहरूको नाम अंग्रेजी वर्णमाला ‘जे’बाट सुरु हुन्छ। उनीहरूलाई सधै घरमा राखिन्थ्यो यद्यपि उनीहरूलाई हेलोविन, डिजनिल्यान्ड र लास भेगासमा फ्यामिली ट्रिपमा भने लगिएको थियो।
नर्स, मनोवैज्ञानिकसमेत देशभरका २० व्यक्तिहरूले सात वयस्क भाइबहिनी र छ बच्चाहरूको पालनपोषण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
TAGS: 13 Child